EACHINLED, nke hibere na 2006, na-agba mbọ ka ọ bụrụ onye ndu ụwa niile na-akwanyere ùgwù maka ngwaahịa na ọrụ nke ọdịyo ọdịyo, mmemme nnukwu ihuenyo na mgbasa ozi mgbasa ozi. EACHINLED bụ ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ dị elu nke mba, nke azụmahịa ya metụtara ngosipụta mgbazinye ime ụlọ, mpụga mgbazinye mpụga n'èzí, ogwe ọkụ ọkụ ọkụ n'ime ụlọ, Mgbasa ozi mgbasa ozi nke LED na HD pixel LED vidiyo, wdg
N'oge gara aga, ihe karịrị mmadụ 300 na-arụrụ ọrụ n'isi ụlọ ọrụ ahụ, ma na-ehibe ihe karịrị ụlọ mmepụta ihe 4 n'ime ụlọ. A nkwado ahịa na mgbe-sales ọrụ netwọk na-guzobere n'ụwa nile nke ga-enye ndị ahịa na ngwọta, nkà na ụzụ ọzụzụ na pụrụ iche na nkwado.
EACHINLED na-ejide ọnọdụ ndu ya na azụmaahịa ya bụ isi nke nrụpụta ihuenyo Ikanam, nke nwere ike ịnye ọtụtụ ụlọ, ime ụlọ, na ihuenyo LED mgbazinye na pikselụ sitere na P1.6-P31.25. A na-etinye ha n'ọrụ agbamakwụkwọ, mmemme imekọ ihe ọnụ, gala, ememme, egwu, ihe ngosi, mmemme egwuregwu, ọgbakọ, ihe ngosi moto, mgbasa ozi mgbasa ozi na atụmatụ mmemme, wdg.
EACHINLED ga-anọgide na-agbasi mbọ ike iji mee ka ọnọdụ ya sikwuo ike dị ka ngwaahịa, teknụzụ na ahịa. N'ACLỌ NCHE a na-enye aka mgbe niile iji nyere ndị ahịa anyị aka imeziwanye mmetụta anya ma mezuo ọrụ mmekọrịta ya.